မေမေ Archives - BuzzFeed Myanmar
မင်းသမီး မေမေ ဆုပန်ထွာ တောင် လက်ဖျားခါခဲ့ရတဲ့ သားသားလေး Roar ရဲ့ အမိုက်စားအိုက်တင်များ
သရုပ်ဆောင်ဆုပန်ထွာကတော့ အခက်အခဲတွေကြားထဲက သူမကိုချစ်လွန်းတဲ့ ခင်ပွန်းနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်အေးချမ်းတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးလေးကိုစတင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး အခုဆိုရင်တော့ တီတီတာတာလေးတွေပြောတတ်နေပြီဖြစ်တဲ့ သားသားလေး Roar Roarကျော်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးတည်းသောသားလေးမို့ ချစ်မဝဖြစ်နေကြရတဲ့အပြင် မိခင်ဖြစ်သူ မင်းသမီးဆုပန်ထွာထက်တောင် အမူအယာတွေတတ်နေတဲ့ သားသားလေးကြောင့် သူမတို့ရဲ့အိမ်ဂေဟာလေးက ပိုပြီး အသက်ဝင်ပီပြင်နေတာပါ။ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် မေမေဆုပန်ထွာတောင် လက်ဖျားခါခဲ့ရတဲ့ သားသားလေး Roarရဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ချစ်ရသူလေးကို လွမ်းလို့ မုဒြာရဲ့ခေါ်သံ ကိုရေးခဲ့တာပါဆိုတဲ့ ခရစ္စတီးနားခီ
ပရိသတ်တွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ မုဒြာရဲ့ခေါ်သံ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဟာ လျှို့ဝှက်ပေါင်းများစွာ၊ လွမ်းဆွေးမှုရသပေါင်းစုံ ၊ခံစားချက်မျိုးစုံတို့နဲ့ ရင်းနှီးခဲ့ရတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကြီး တစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးရဲ့ ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာမဟာ ဒါရိုက်တာ ခရစ္စတီးနားခီ ဘဲဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ သားလေးကို လွမ်းဆွေးပြီးရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ မနေ့က ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်နဲ့ ကိုသီဟလွင်တို့ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲကိုတော့ အနုပညာရှင်တွေများစွာတက်ရောက်ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ထိုပွဲလေးအတွင်းမှာတော့ လှပလှတဲ့ မယ်ပျိုမဒီလေးတွေကြားထဲမှာမှ ပရိတ်သတ်တွေများစွာ စိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့ ပျိုမဒီလေးနှစ်ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
အနုပညာလောကထဲက မော်ဒယ်မင်းသားလေးရှင်မွေလ ကတော့ ပရိတ်သတ်တွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ရှင်ေမွလကိုတော့ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာလဲ မြင့်မြတ်နဲ့တူတဲ့ အနုပညာရှင်လေးတစ်ယောက်ဆိုပြီး ပရိတ်သတ်တွေကမှတ်ချက်ပေးထားတာလဲဖြစ်ပါတယ်
ဒုတိယ ရင်သွေးလေး တွေနဲ့ လှနေတဲ့ မေမေတွေ
မေမေ ချောရတနာ နဲ့ မေမေ ၀မ်း တို့ကတော့ ဒုတိယ ရင်သွေး လေးတွေ လွယ်ထားကြတဲ့ သူတွေပါ။ ရင်သွေး လေးတွေကလဲ မကြာခင် မွေးဖွားတော့မှာ ဖြစ်ပြီး ပထမ ရင်သွေး လေးလိုပဲ ရင်ခုန် နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မင်းငယ်ငယ်က မင်းငိုသံကြားရင် အချိန်တိုင်း မင်းဆီ ပြေးလာတတ်တဲ့ မင်း အမေ အတွက် အချိန်လေး ၅ မိနစ် လောက်ပေးနိုင်မှ ဒီပို့ ကို အရေးတယူလုပ်ပါ …!
မူကြိုကျောင်း ရဲ့ ကျောင်းပေါက်ဝမှာ မေမေ့ ခြေထောက် ကိုဖက်ပြီး သူငိုယိုတောင်းပန်တ
ဖေဖေ ဘာလို့ မေမေ့ကို ကြောက်တာလဲ?
မေမေဟာ သူစားချင်တဲ့မုန့် တစ်ခုခု
(ရင်နင့်အောင်ခံစားရသော အဖြစ်အပျက်ကလေးတစ်ခု ပြန်လည်မျဝေပါသည်..)